Xogsoor News Network – Page 3 – Just another WordPress site
Al-Shabaab iyo kooxda macawiisleyda oo ku dagaalamay Deegaan ka mid ah Gobolka Hiiraan.
Xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka kana mid ah kuwa aan taageersaneyn xukuumada ayaa sheegay in dowlada Soomaaliya gaar ahaan madaxda dalka aysan nidaamka ku qancin Shacabka. Waxaa uu ka hadalay sababaha keenay in shirar beeloodyo ay ka dhacaan dalka gaar ahaan Muqdisho iyo Garowe waxaana […]
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa qaatay go’aan hadal heyn badan dhaliyey kadib markii gabar Soomaali ah uu u magacaabay xubin ka tirsan golaha Wasiirada ee dalka Itoobiya. Wasiirka Haweenka iyo Carruurta Itoobiya ayaa loo magacaabey Filsan Cabdullaahi Axmed oo sidii kale ah Milkiilaha Telefishinka keliya ee madaxa bannaan ee […]
Afar qof oo looga shakiyay Coronavirus oo Muqdisho lagu karantiilay
Wasiirka Caafimaadka dowladda Soomaaliya Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay karantiishay Afar ruux oo ka yimid dalalka uu sameeyay Cudurka Coronovirus. Mid ka mid ah dadkaasi ayaa ka yimid dalka Shiinaha, 10-kii Bishaan halka Saddexda kalena ay dalka soo gaareen Maanta sidda ay shaacisay Wasiirka. Waxa ay […]
Kooxda Macaawisleyda ah ee la dagaallanta Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen inay dagaal ku qaadeen Al-Shabab kuwaas oo sugnaa degaan lagu magacaabo Beero Yabaal oo hoostaga degmada Buula Burde ee Gobolka Hiiraan ka titsan. Waxay sheegeen kooxda macawiisleyda in weerarkaasi ay ku dileen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab, kaasi oo lagu magacaabi […]
Al-Shabaab oo weerar ku qaaday laba Bas oo maraayay Deegaanka Mandheera.
Maleeshiyaad ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa weerar gaadma ah ku qaadey Labo Bas oo marayay deegaan ka tirsan magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa la sheegay in rasaas ay ku hubiyeen labada Bas halkaasi marayay iyadoo uu weerarkaasi ka dhashay khasaaro kala duwan. Guddoomiyaha magaalada Mandheere […]
Warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa ku soo warrantay in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo katirsan aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka, lagana soo doorta Minesota ay shaacisay inay aqal gashay. Ilhan ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay sawir iyada iyo seygeed cusub ee Tim Mynett. Tim ayaa horay u ahaa lataliyaha Ilhan Cumar […]
Afhayeenka Cusub ee Maamulka Galmudug Cismaan Ciise Nuur (Taardhuleed) ayaa madaxdii hore ee Ahlu Sunna ee looga adkaaday dagaalkii Dhuusamareeb ku eedeeyey inay ahaayeen Shaqsiyaad dano gaar ah leh oo aan laheyn wax hadaf ah Taardhuleed ayaa Shacabka Galmudug ugu baaqay inay la qabsadaan nidaamka cusub ee ka dhashay Galmudug […]
DEGDEG: Madax fara badan oo ku qul qulaysa duleedka Magaalada.
Wararka ka imaanaya deegaanka Dharkayn-geenyo oo dhacda galbeedka magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in ay kusii qul qulayaan deegaankaasi wufuud badan ka kala tagay Puntland, Somaliland, dowladd deegaanka Soomaalid, qurba joog, waxgarad, siyaasiyiin iyo bulsho weyn badan si ay uga qayb galaan caleemasaarka Garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo maanta uu […]
SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo Kafaalo qaaday Nolosha Qoyska.
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cisbitaalka Yardimeli ee magaalada Muqdisho ku booqday qoyska uu ka tagay -Alle ha u naxariistee- Cabdinaasir Cabdulle Gacal oo ka tirsanaa Ciidanka Militariga dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha oo dul istaagay xaaladda caafimaad ee labo wiil oo mataanaha ah oo cisbitaalkan ay ku dhashay […]
Professor Cabdiraxman Garaad Malla Oo Bixiyey Waraysi Uu Kaga Hadlayo Arimo La xidhiidha Khilaafka Somalia iyo kenya Oo Aan Xidhiidh Wanaaagsan Lahayn Mudooyinkan Dambe Sido kale wuxuu carabka ku adkeeyay in Dawlada Soomaaliya looga fadhiyo Doorashada Ay Sheegeen Inay Ku Qabtaan Wakhtigeeda Dhanka Kale Waxa Uu Dhaliil Ujeediyey Maamullada Qaar […]